Ndiyakuhalalisela ngoSuku lweValentine ka-2017 kumyeni oyintanda kunye nentombi, intombazana ethandekayo kwindinyana kunye ne-prose-short and funny to friends
Usuku lukaValentine luyisiganeko esihle sokuvuma ukuba intombazana okanye indoda. Ukuba uthanda umntu ngobude, kodwa akazange alinge ukuvula imizwa yabo, yenza ngoFebruwari 14. Ubuliso lwakho ngomhla kaValentine ka-2017 Kuya kuba yinto emnandi kakhulu kumntu, mhlawumbi, ungacingi ngeemvakalelo zakho ezinzulu. Ngokuqinisekileyo, kwiSonto likaValentine iholide ayithethi nje kuphela ngothando lomntu nomfazi. Ngaloo mihla iigentines ezinomncinci zincwadana kwivesi kunye neprose zinikezelwa kubahlobo, bahlobo, abasondeleyo. Isithethe esihle sentshona ngoFebruwari 14 ukutshintshana izipho kunye neenqweno zothando zobudlelwane bobuhlobo zihlala zivunywe ngabantu basekhaya ukuba "bahlasele." Zininzi ezininzi ezisemthethweni, iholide ezinzulu ziye zabanjwa, kodwa zininzi iintsuku xa kunokwenzeka ukuthetha ngokuvulekileyo, ngokuvakalayo, ngentliziyo yam yonke ngothando. Nangona ungekho othandweni, ngomhla weValentine uqiniseke ukuba unike izigulane ngezibongo kubangani bakho, abantwana, izihlobo. Ikhadi leposi elifutshane neendinyana zeentlobo ezifutshane ziya kukufudumala umphefumlo wakho.
Uvuyo olukhulu ngoMhla wezithandwa zonke ngo-2017 indoda ethandekayo kunye nesithandwa -Iingqungquthela ngoFebruwari 14, 2017 kumntu wakhe
Ngesizathu esithile kukholelwa ukuba emtshatweni, uthando luyancipha - ubomi "budla" iimvakalelo, iimvakalelo kumyeni wakhe, umfazi. Ngokuchasene noko, njengokuba amava omtshato abatshatayo abonisa ukuba, uthando olupheleleyo kunye nexesha luba lukhulu. Ewe, ukuvuya kunye nothando olukhanyayo, olunezihlandlo zokuqala zokuziqhelanisa nomthandwa wakho luya kupheleka. Esikhundleni sentshiseko kuvela ingcamango enzulu yothando, ukuzinikela, ukunyaniseka. Ndixelele ngendlela othanda ngayo umyeni wakho kwivesi. Yenzani ngomhla weValentine ngomhla kaFebruwari 14, 2017. Nika uvuyo kumntu oxabisekileyo ngeendinyana ezimnandi kunye novuyo olukhulu ukusuka entliziyweni. Ngokuzaliswa ngothando, Makhe ndivuyise, Siya kuqhuba ngaphandle komthendeleko, Emva koko, uthando lwam lubaluleke kakhulu. Wena ungumntu wobomi bam, Sonke sikunye kunye nosapho: Ufunda izicamango zam, Ewe, ndikuthanda. Fumana imibuliso, Lo mhla uyamangalisa.
Ufika ekhaya ngokukhawuleza, Uyazi, uyaqiniseka ukuba ewindow Ukhanyiswa kuphela ngokukhanya kwam kusihlwa, kwaye ndihlala ndilinde, ukudabuka okuncinci. Yaye intliziyo yam ivakalelwa ukuza kwakho Ngaphandle kokuba uhlala esangweni, Inhliziyo yokulangazelela, ngokungathi unyaka wonke, ndilinde ngewindow ekufikeni kwakho. Namaxesha onke ndivuyayo kukuba ndiphilile kwaye ndisekhaya, Ukhawuleza ukuya kwindlu yethu, kuba andilali, andiyidli, ndikulindele nje wena, enkingeni. Ukufudumala, ukunyamekela, ukunyamezela nokuthuthuzela Phela phantsi kwephahla apho wonke umntu akuthanda khona, Apho bakholwa kunye nethemba, kwaye ulinde, Apho kungekho nkohliso kwaye akukho nto ithengiswayo.
Yaye uyazi ukuba kubaluleke kangakanani ukuva La mazwi aya kufudumala ebusuku, Lawa mazwi owake wathetha, La mazwi ... Nceda, nceda ungathuli. Gcoba ubusuku obu busuku, bhinqa amagama ambalwa athandekayo, Khumbula indlela oye wambamba ngayo isandla sam, Khumbulani ukuziva okulula: uthando. Khumbula indlela undithandile ngothando, Njengephupha ndibambe isandla sam, Njengolwandle olungenamkhawulo wothando Thina kunye nawe. Ndixelele ukuba ilanga litshona - ilanga litshintshe Andiyi kutshintsha mna kunye nawe, Ndixelele indlela ungamkela ngayo Uphinda uphinde uphinde usebenzise amagama. Ndixelele, ndixelele, ndixelele, Indlela yokuthanda ngayo iya kuhlala iqina.
Ukuvuyiswa ngokunyanisekileyo ngomhla wezithandwa zonke ze-2017 intombazana ethandekayo - i-valentines ezithandekayo kunye neenkondlo ngothando
Ndiyakuvuyela intombi yakho ngomhla we-Valentines Day 2017, mnike i-valentine entle ngamazwi anyanisekileyo ngothando kunye nokunyaniseka. Makhe umntu acinge ukuba uSuku lwe-Valentine yiholide ye-pro-Western, engekho kwizithethe zaseRussia. Ngaba izithethe zibi ngoFebruwari 14? Kutheni ungathathi kwinto ethile yomntu into enhle ngokwenene kuwe? Ngaba kubi xa kukho enye imini "eyongeziweyo" kunyaka esithi "Ndiyamthanda" umntu oxabisekileyo ebomini bakho? Silungiselele iholidi ukukhethwa kweentlobo ezahlukeneyo, ezifutshane kunye ezide, izibongo kunye novuyo loSuku lweValentine. Siqinisekile ukuba uya kufumana apha ivesi lakho. Ndiyakuvuyela bonke abathandekayo Ngobunye beentliziyo. Ngaloo mini uya kufisa ukuchaza, ekugqibeleni. Mhlawumbi ucele ukuxolelwa, Thatha inyathelo ekubhekiseleleni, Yiphosa konke ngaphandle kokuzisola Khumbula lo mhlwanje Njengengqungquthela yamnandi, njengesipho esihle sesiphetho ... Bonke abathandekayo bahle, Abathandekayo bonke bayaboni.
Ibhokisi leposi liphula, i-Valentinki ithatha. Bhala intombazana kunye nenkwenkwana, Kususela kumthandane ongenamathele. I-imeyile "i-imeyile" kunye neeposikhadi, Mema ngomhla. Baye besaba ngakumbi kunokuba bahlushwa.
Usuku olumnandi lweValentine! Nasi umfanekiso omhle - Nika iintombi zeentombi! Lapha, uthando, ungubani! Ukuba, nkwenkwana, wathandana, Ukuba uthe wabuya ucinga, Musa ukuhlala, Uze uye emthandweni wakho! Nika iintyatyambo ngeentyatyambo, Xelela iivesi zevesi, kwaye uya kukuxelela ngoko ngokuqinisekileyo uya kuthi "Ewe! "Ukhohliwe imicimbi yakhe, Wayekulindela wena! Wayephupha ngawe, Wathandana nothando! Ewe, uhleli, uthe cwaka, Inhliziyo yakhe awuyikugubha ... Konke, uphonsa imicimbi, Uze uphenduke kuwo, njengentsimbi! Lindani, ntombazana, uya kuza, uvuyo lwakho luyakukufumana! Vumela uthando lukuthwale kude Namhla kwaye ngelixa! Akusiyo into, ngonyaka woLusuku lweValentine - iNyanga kaFebhuwari ibhiyozelwa nguMhlaba wonke!
Mfutshane nincoma ngoSuku lweValentine yonke into - Iivesi ezithandekayo kunye namagqabi amnandi ngoFebruwari 14, 2017
NgoSuku lukaValentine luka-2017 ungancoma kuphela amantombazana akho abathandayo kunye nabafana. Kutheni ungathumele i-valentine ehlekisayo kunye neendinyana ezimfutshane zangaphambili / zangaphambili? Ngokuqinisekileyo, ngaphambi kokuba uqhekeke, nonke nihlangene nolwandle olunemvakalelo emihle, uthando olunolwazi, luncedana. Kutheni ukulibala ngokulungileyo? Ndiyakuvuyela umfana / intombazana yangaphambili kusuka ngoFebruwari 14, xelela ngemvakalelo yakho, mbulela umntu ngexesha elichithwe kunye; unqwenela uthando olutsha nolungileyo. Sebenzisa ukhetho olufutshane kule phepha, okanye ucinge ngentsuku encane yeSuku sikaValentine.
Namhlanje andinakulala kwakhona, ndiyakhumbula ilizwi lakho Ndifuna ukulibala kwakhona, Awazi ukuba ukwahlukana kwentlungu ende. Ndifuna ukukubona ngokulandelayo, Hug kunye nokubamba ngobumnene, Njalo uzame ukusondela kuwe kwaye ungavumeli ukuya naphi! Ndiphelelwe yinto yokucamngca - Ndifuna ukuba nedwa yedwa, Ngoko ube nam, Yikholwa kwintando yam nentlungu!
Umfanekiso ongaqhelekanga - Inyaniso uValentine uthi: Phakathi kwabo bonke abahlobo bam Uhlala kwii-mile yonke! Ndiphupha ngawe kwaye ndasebenzisa amaphupha am. Ndinawe eduze kwam, Njengomntu onqabileyo phantsi kwelanga.
Mncoma ngamazwi abo kwi-Valentine's Day yohlobo lwabahlobo bokwenene - iigentines ezimnandi zikaFebhuwari 14, 2017
Ngomhla kaFebruwari 14, abathandwayo ababesithi nje ngeemvakalelo zabo. Abahlobo abahlala bethembekile kuzo zombini "usizi novuyo" nabo bafumana imibuliso yokuzonwabisa. Ngamnye wabo unesiqingatha, iqabane okanye intombi, umntu omthandayo ngokunyanisekileyo. Ukuhambisa i-valentine enhle kumhlobo kwi-Valentine's Day 2017, mbulela ngamagama akho ngokunyaniseka kwakho, ngenxa yobuhlobo bakho, ukhula ngamandla ngaphezu kweminyaka. Ukuba ukholelwa ukuba ukutsala i-strap of loneliness isiphephelo sakho, ngoko le ndawo ayiyinyani, isifiso sam siya kuba kukubona oku. NgoFebruwari 14, xa amawaka encwadi, i-sms-ok, i-mms-ok ithunyelwa rhoqo ngeesibini kwizikhokelo ezahlukeneyo. Abantu badinga "lyamur" kwaye awuyinto ehlukile kule nto, kufuneka uncoma umntu. Ndixelele ukuba ngubani lowo ohambayo kwaye unike ngamazwi okufudumele onayo. Ukuba sele unomntu, qinisekisa kwakhona ngaloo mini oyithandayo, kwaye ukuba awunayo na umntu okwangoku, awukwazi ukulahlekelwa yinto na ngakumbi kufuneka uyinike i-valentine. Banoyolo bonke abathandayo, nina!
Xa kukho iholide ehlabathini njengomhla wabathandekayo, umntu unomnqweno wokufisa wonke umntu ukuba avule iintliziyo zabo ngesimo sengqondo esintle kakhulu - ngenxa yothando! Ngoko ukuba ngamnye wethu akayi kululeka ukuva le mvakalelo emangalisayo ukuba ungcolisi ongcwele wabathandi bonke abathandekayo beValentin wayeya kukhusela iindleko zakhe ekudakaleni nasekudakaleni, kodwa wayeza kunika ukuphela kwezinto ezithandwa ngumntu! Emva kwakho konke, ekubeni kuleso sidima kakhulu, ihlabathi livulekile ngokuchukumisayo, ngoko-ke, makungapheli lo lonwabo kwaye ngamnye wethu uya kuba noSanta Valentine emva kwakhe oya kusindisa uthando lwethu iminyaka emininzi!
Intliziyo evuyayo ngomhla weValentine ngomhla we-prose kunye nezibongo - Indlela yokusayina ikhadi le-valentine ngoFebruwari 14, 2017
Ukuba awukagqibekanga ukuba ungayinayo i-valentine ngoFebruwari 14, ukuba awukwazi ukwenza ukhetho phakathi kweprose kunye nezibongo, eli phepha liyakunceda wenze isigqibo esifanelekileyo. Siqokelele zonke iintlobo zovuyo ngabathandekayo bakho kunye nabahlobo kwiNtsuku kaValentine ka-2017. Ungasayina uSuku lweValentine ngegama lakho, kwaye, ukuhlala incognito, kunjalo ngomhla kaValentine. Ikhadi leposi elihle linokuthengwa, kodwa sincoma ukuba ubonise ingcamango encinane - ukwenza oko.
Siyanincoma ngokunyanisekileyo nangokunyanisekileyo ngeNtsuku kaValentine enhle kwaye enhle! Usuku oluhle kunye olungavamile lwezithandwa zonke luzisa abantu abaninzi, ukuvuma, izifiso, ukubanga kunye nokuzibandakanya, kunye nezipho-iintliziyo ziya kuhlala zihlaziyileyo kunye ne-amulet yothando lwakho oluhle kwaye lukhulu kakhulu! Sifisa ukuba unomona wothando olungenangqondo kunye nomlingo, umhlobo othembekileyo nothembekileyo ebomini, ubudlelwane obumnene nabathintekayo. Yaye yonke imihla yakho iqale ngokuqatshelwa ngothando, inceba kunye nokubukeka komntu othandekayo nomthandayo!
Usuku lukaStartine lukaSt. Ngumhla wabathandi bonke ehlabathini. Masibonge namhlanje bathandekayo bethu, abahlobo kunye nezihlobo zethu. Kwaye sifuna ukuba wonke umntu amthande aze amthande. Makhe le mini ufumane amakhadi amaninzi e-valentine evela kubantu bakho abathandekayo abanesifiso esihle kunye nomusa.
Ngosuku lukaValentine Ndifuna ukunqwenela ukuba uthandwe rhoqo, "Uthande" oza kuthetha! Vumela uthando luhlale luphefumlela, Bashaya iintliziyo ngokubambisana, Abazi izikhalazo, Neentsuku ezonwabileyo-izigidi!
Namhlanje uMongameli wothando uyabusa, kwaye igazi lethu elitshisayo lipheka kwakhona. Siphuthuma esinye isipho sikaValentine, kwaye amazwi amnandi nje athi! Maye namhlanje malube ngumhla omnandi, kwaye abathandekayo bakho mababe buvila - Ngothando ukuvuma, ukukhathazeka, ukumanga, Imibala, izipho uhlamba! Kwaye abo abangazange bahlangabezane neengcambu zabo, uSt. Valentine uya kunceda namhlanje, Ngamehlo omntu onamahloni kunye nethenda, kunye kunye ebomini ukuya endleleni! Ukuqwalasela into ekuvuyisayo ngomhla wezintando zonke zika-2017 onokuzibonisa kubathandekayo bakho, cela uncedo kuthi. Asikumeme ukuba ukhumbuze ngemini ye-14 kaFebruwari 14 imibongo emide - ivesi elifutshane lempilo okanye iprose, ezithethwa ngamagama akho, ziya kukwanela. Ukunika isipho intombazana, intombazana ethandekayo, indoda okanye umntu, ungakulibali ukutshala imali yakho kwi-valentine encinci ngevesi elifutshane malunga nothando. Usuku lwe-Valentines yiholide yothando, ukunyaniseka nokuvuma!
NgoFebruwari 14 esikolweni: njani ukulungiselela iholide kubo bonke abathandi
Ukunyamekela ubuso, umzimba, imilenze, izandla
Inkukhu kunye namazambane kwi-multi-screw
Ikhekhe le-Buckwheat ne-cottage cheese
I-sauce yewayini ebomvu
Ukutya kwe-Apple ukulahleka kwesisindo
Imigaqo ebalulekileyo yokwazisa kwiqela
Indlela yokukhetha iingubo zoboya eMouton